Uphendlo lukaGoogle oluKhonkco kwaye luthunyelwe kwizaziso zobuxoki kwiWordPress | Martech Zone
IGoogle Console yokuKhangela kwaye ithunyelwe kwizilumkiso zobuxoki kwiWordPress
NgeCawa, ngoFebruwari 12, 2017 NgoMvulo, Februwari 13, 2017 Douglas Karr
Ngamanye amaxesha ndiyonwaya entloko apho iGoogle ihamba khona nayo khangela ikhonsoli. Ngelixa ndikholelwa ukuba yinkonzo emangalisayo ukufumana i-malware kwiziza kunye nokuthintela ezo ndawo ukuba zingadweliswa kwiziphumo zokukhangela, andiqinisekanga ukuba ndifuna uGoogle ukuskena iisayithi ezikhangela imiba.
Ityala elalikwindawo yayisisilumkiso saphambi kwexesha esaphuma saya kum kwaye, ndiyaqikelela, amashumi amawaka eziza ezazichaza ukuba ziqhuba ingxelo yeWordPress engakhuselekanga. Ingxaki? Yayiyinyani ebubuxoki kwaye uninzi lweziza eneneni zazisebenzisa ingxelo yokugqibela ye-WordPress. Ngelixa ndingazazi iindlela ezazisetyenziswa nguGoogle ukuqinisekisa iisayithi, kubonakala ngathi i-caching isenokuba yingxaki. Kuba amaphepha agciniweyo aqhelekile kuyo yonke i-Intanethi nakwiindawo zeWordPress, ibangele isiphithiphithi.
Ingxaki, ewe, yayikukuba uninzi lwabamkeli bezo imeyile babengabaxhasi abahlawula ukusingathwa okuqhubela phambili nokhuseleko, kwaye banayo iarhente, efana zethu, sisebenza ukuqinisekisa ukuba abathengi bethu bakhuselekile. Xa befumana i-imeyile enjalo, ihlala ibangela ukuphazamiseka. Ngombulelo, uGoogle uphendule kwangoko Iiforam zabo zewebhu ukuba, ewe, babangele umba.
Molweni nonke - egameni lamaqela aqhuba le nzame, nceda wamkele uxolo lwethu ngochuku esilwenzileyo. Siyazazi iimeko apho siye sathumela imiyalezo kubanini beziganeko zeWordPress eziphuculweyo kwinguqulelo yamva nje ukusukela ngokurhubuluza kwethu okokugqibela- besikrokrela ukuba kuyakubakho inani lamatyala ngaphambi kokuba siqale umzamo wokuthumela imiyalezo. UJuan Felipe Rincón, uGoogle
The mea culpa yaxatyiswa, kodwa okwangoku, kubonakala kuyinto engaqhelekanga ukuba uGoogle angazisungulela into enje. Imisonto embalwa kamva kwincoko, umphathi wezemveliso we-WordPress onxibelelene neqela likaGoogle kwaye athi angathanda ukusebenza kunye kule nto. Andiqinisekanga ukuba kutheni le nto ingakhange yenzeke kuqala, kodwa enkosi ngokulunga isiya kwelo cala.
Ngelixa ngaphandle kwamathandabuzo uGoogle anazo izixhobo zokwenza lo msebenzi, andiqinisekanga ukuba ndiyayixabisa indawo inkampani eqhubeka inyathela kuyo. Ndiyayithanda inyani yokuba uGoogle ubonelela ngezixhobo ezinje ngeKhonkco lokuKhangela, uhlalutyo, uMphathi weeTag, kunye nabanye ukusinceda ukuphucula indlela abasebenzisi abanxibelelana ngayo neendawo zethu. Kodwa xa eneneni bewela umgca - njengakule meko nakwi-AMP, i-SSL, iSelfowuni, kunye namanye amanyathelo, kubonakala ngathi banyathela iinzwane zethu ngakumbi nangakumbi.
Ukwenza izindululo kulungile, kwaye ukubonelela ngezixhobo ukubonelela ngezo ngcebiso kubhetele nangakumbi. Kodwa xa uGoogle eqala ukulumkisa okanye nokuzohlwaya iisayithi ezingaziphathi ngendlela iGoogle ezinqwenela ngayo ukuba zibonakale ngathi zindongamela.
tags: ikhonkco lokukhangela kuGoogleI-google webmastersUJuan Felipe RincónWordPressukhuseleko kwilizwi
UGoogle ufana neSebe leMfundo. Ukuba izikolo zifuna iidola zomdibaniso kufuneka zilandele imigangatho ethile enokuthi okanye engafanelani noluntu lwabo. Ukuba ufuna isibonelelo sokubonisa kwiziphumo zokukhangela kuya kufuneka uthobele imigaqo kaGoogle nokuba ayikulungelanga. Ndicinga ukuba ukwahlulwa kweinjini zokukhangela kunyanzelekile ukuba singabinayo inkampani enkulu yokuhlukumeza abantu ukuba bangenise. UGoogle wenza izinto ezininzi ezintle ezixhamla uluntu lobuchwephesha kodwa zikwasebenza ngokuthanda kwabo ngawo onke amaxesha.
Andazi… Ndifumene isaziso njengabanye babathengi bam. Andiqondi ukuba ngumba. Ukuba yenzekile kaninzi-ninzi ndakuba nexhala. Ndibanika ukupasa kule.
Mhlawumbi unabathengi abahle?